साईकल चढी रामप्यारी फकाउने, रेखा भने आँखा कर्काउने ? (भिडियो) « Mazzako Online
साईकल चढी रामप्यारी फकाउने, रेखा भने आँखा कर्काउने ? (भिडियो)
मज्जाको अनलाईन, पुष ७ गते, मंगलबार, २०७२, काठमाण्डौं ।
रेखा थापा अर्थात यो बेलाकी ‘रामप्यारी’ लाई फकाउन नायक सविन श्रेष्ठले निकै कसरत गरेको देखिन्छ । उनी साईकल चढी धाएको पनि देखियो । पछ्याउदै उनी पशुपति परिसरमा पनि पुग्छन्, तर ‘रामप्यारी’को उही कुरा… “धेरै बर्ष पालेके दिल यति छिट्टै दिन्न म” । अब सविनले अरु के के गर्छन्, त्यो सबै जान्न त भिडियो नै हेर्नु पर्छ ।
नायिका रेखा थापाको चलचित्र ‘राम प्यारी’ गीति भिडियो मा रेखा र सविनको छेडखानी मज्जाले देख्न पाईन्छ । ‘अर्को जुनी कुन्नी’ बोलको यस गीतमा रेखा स्वयमले संगीत भरेकी हुन् । गीतमा राजेश पायल राई र मनिषा पोखरेलले स्वर दिएका छन् । रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको यस गीतलाई किरण खरेलको कोरेका हुन् ।
सार्वजनिक ‘राम प्यारी’ को गीतले दर्शक तथा श्रोताको मन जित्नेमा नायिका तथा निर्मात्री थापा विश्वस्त छिन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरा यस अघिका फिल्महरु ‘काली’ र ‘हिम्मतवाली’ का जस्तै ‘राम प्यारी’ को यो गीतलाई पनि दर्शक तथा श्रोताले मन पराउनेमा विश्वस्त छु ।’ सविर श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म महिला टेम्पु चालकको कथामा आधारित छ, जसको शिर्ष भूमिकामा रेखा प्रस्तुत भएकी छन् । रेखासँगै फिल्ममा सविन श्रेष्ठ, आभाष अधिकारी र आश्मा डिसीको अभिनय रहेको छ । ‘राम प्यारी’ आउँदो चैत २६ गते देखि अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदैछ ।